Njirimara nke ụbọchị | Nutri Nri
Bọchị pụtara site na nkwụ nkwụ ma anyị nwere ike ịchọta ha ihe karịrị puku afọ isii gara aga. Nkọpụta ya malitere na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na North Africa, mesịa gbasaa na mba ndị na-ekpo ọkụ.
Mkpụrụ osisi nkwụ nwere ọtụtụ ihe onwunwe nke ọtụtụ na-amaghịYa mere, anyị bịara ebe a ịgwa gị uru ya bara na ihe ha nwere ike imere gị.
El ụbọchị dị ka mkpụrụ osisi bụ oval in shapeỌ bụ agba aja aja na agba, anụ ya siri ike ma na-atọ ụtọ ma n'ime anyị na-ahụ ọkpụkpụ elongated. Anyị nwere ike ịchọta ụdị ihe ruru 4 centimeters n'ogologo. Dịka anyị kwurula, a na-etinye akọ ya na mpaghara nke Middle East, North Africa na ụfọdụ mpaghara California. Ọ bụ ezie na ugbu a, anyị nwere ike ịchọta ha n'ọtụtụ ebe n'ụwa.
A na-etinyekarị ha na otu mkpụrụ, a na-emeso ha otu ahị mkpụrụ vaịn ma ọ bụ aprịkọt a mịrị amị, agbanyeghị, ụbọchị na-eto ma tozuo na osisi n'onwe ya.
Dị ka ị maara, enwere ọ bụghị naanị otu ụdị ụbọchịỌ ga-adabere mgbe niile n'ụdị nkwụ. Ọ bụ kwuru na nke kacha mma mma nke ụbọchị a hụrụ na mpaghara nke Tunisia, ha nwere nnọọ ezigbo, ezigbo na ọchịchịrị akpụkpọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ụbọchị turkish Ha dịkwa ama ama, ha na-agba ọchịchịrị ma na-esighi ike. N'ikpeazụ, anyị na-ahụ ụbọchị, site na Elche nke bụ nke magburu onwe ya mma.
1 Otu esi eri oge
2 Njirimara na uru nke ụbọchị
3 Ndụmọdụ maka ụbọchị
Otu esi eri oge
Na nri ndị Mediterenian A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe, a pụkwara iji ha mee ihe desserts, dị ka isi nri ma ọ bụ ụdị efere ọ bụla.
Ozugbo e wepụrụ ọkpụkpụ ahụ, anyị nwere ike jupụta ha na mkpụrụ osisi mịrị amị ma ọ bụ ụfọdụ mpekere cheese.
En Gris na Turkey, ha na-eji ya na anụ na azụ akwadebe ya.
Anyị nwere ike ịchọta ụbọchị mmanya, enwere ike ime chutney, n'ụdị pasta na mkpụrụ maka ngwaahịa ime achịcha.
Anyị ekwesịghị ichefu nke ahụ akụrụ osisi, site na nkwụ anyị na-enweta obi nkwụ, nke a na-eji na salads.
Njirimara na uru nke ụbọchị
Afọ na-enye anyị nnukwu ihe oriri na-edozi ahụ nke ahụ anyị na-ewe maka ike n'ụbọchị. Akara ubochi site na inye anyi otutu ike ma mee ka obi anyi di nma.
Ọzọ anyị na-agwa gị ihe bụ uru kacha mma anyị nwetara site na ụbọchị.
Akwadoro ka ị rie ụbọchị oge omumu ma ọ bụ mgbe achọrọ ume ọzọ.
Ha na-abawanye ikike ọgụgụ isi na agility.
Ọ bụ nri jupụtara na ya antioxidant amino asịd.
Na-alụ ọgụ dị ka nke a free radicals.
Ha na-enye hydrates nke carbon, potassium, site, calcium y mangnesium.
Nwere acid pantothenic, dị mkpa iji gbanwee abụba n'ime carbohydrates na ume.
Datebọchị ga-enyere anyị aka ime egwuregwu na-amasị anyị. Ọ bụ onye na-akwado ya iji mepụta akwara.
Meso ya nrụgide la nchegbu ma na-enyere anyị aka ịrahụ ụra.
Gbochie anyị inwe ngosipụta nke nrụgide.
Ọ bara ọgaranya na fiber, ya mere, ọ na-enyere anyị aka ịlụ ọgụ afọ ntachi.
Na-enyere aka belata cholesterol n’ime ọbara. Ha enweghị abụba ọ bụla ma nyere aka mezie ọkwa.
Ha na-akawanye mma ma na-ekere òkè na ezigbo mgbaze, na-egbochi ndị afọ ntachi, na-ezere gas ma na-enye aka n’etinyeghị oke ibu.
Ọ na-enye shuga ndị dị mkpa nke na-enye anyị ume. Ihe ndi ozo bu glucose, fructose na sucrose.
Ha bara ọgaranya na ígwè, n'ihi ya, a na-atụ aro ya maka ndị niile nwere ya anaemia, ma ọ bụ ndị agadi chọrọ obere ume.
N'akụkụ aka nke ọzọ, bara ọgaranya na potassium ma dị obere na sodium, ụbọchị enyere aka ịhazi usoro ụjọ.
Ndụmọdụ maka ụbọchị
Bọchị nwere ogologo ndụ, ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ha anaghị eme ihe ọjọọ. I kwesiri ima otu esi echekwa ma chekwaa ha nke oma ka ha ghara imebi. N'ihi nke a, anyị na-akwado ịchekwa ha na ite ikuku na iko iko akọrọ, na ebe ọkụ anaghị ekpuchi ha.
Dika anyi kwurula, ubochi bara uba na otutu nri na ihe ndi ozo, dika calcium, phosphorus, potassium, magnesium na vitamin nke otu B, provitamin A, C na D.. Egbula iwebata ya na nri gị ka ị nwee ike irite uru na ha niile. I nwere ike na-a consụ nkezi nke 3 na 5 ụbọchị a ụbọchị.
Tastetọ ha dị ụtọ, ha bụ na-eju afọ ma enwere ike iri ha na nri nri ịgha ahụ, agbanyeghị, anyị ekwesighi ịkatọ ha n'ihi na ha nwere ọgaranya shuga, nke n'agbanyeghị na ha bụ bara uru nwere ike ịgbanwe ọnwụ anyị.
Dị ka ị hụworo, ụbọchị bụ nri pụrụ iche nke eriworo kemgbe ọtụtụ puku afọ, enwere ike ịchọta obere mkpụrụ nkwụ ahụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile nnukwu ụlọ ahịa, ahịa na ụlọ ahịa ngalabaOtú ọ dị, ogo ya ga-adịgasị iche dabere na ebe o si bịa.
Chọọ àgwà kacha mma ma chọpụta ebe ụbọchị ị kachasị amasị gị kachasị abịa, n'ezie ị ga-ahụ ụfọdụ ndị ị hụrụ n'anya na nke ị ga-eji esi nri dị ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Njirimara nke ụbọchị
Uric acid amachibidoro nri